Hita amin’ny firafitry ny Lahatsoratra hita ato amin’ ny Boky dia tsy manompo Andriamanitra afa-tsy Tokana ihany ( Monoteista ) ny Mpanoratra . Raha manjohy akaiky ny Tantara manontolo isika dia resaka mahakasika ny Andriamanitra Tokana no misongadina indrindra . Izany hoe : “Tsy misy afaka hiady amin’ Andriamanitra sy mitady haka ny toerany” .
Tsy mba misy adi-hevitra teolojika , toy izay fahita amin ‘ ny Epistily nosoratan ‘ i Paoly ho an’ ny Romana , amin’ity Boky ity . Ka izany no ahitantsika ato amin’ ny Boky , “Fa tsy misy Anaran’ Andriamanitra hafa , fa Andriamanitra Tokana ihany no ivavahan’ ny olona rehetra” .
“Tokana Andriamanitra” , hoy izy , ka :
Any amin’ ny Lanitra Avo no itoerany ,
Ny Seza Fiandrianany dia miorina tsy hihetsika mandrakizay
Andriamanitra dia Tsy Takona , na Voatakona , na Voasakana tsy hahita ny olombelona .
Izy dia mahita ny olombelona rehetra, fa ny olona kosa no fohy maso sady manam-petra .
Tompon’ ny Fahendrena Izy, ka tsy misy afaka hampianatra Azy , sns…sns…
Avy amin’ny fahatsapan’ i Joba izany rehetra izany , no nahatonga azy handinika indray ny Teniny, ka nahaloa-bolana azy hoe :
Ahoana no fiheveran’Andriamanitra ahy ?
Inona moa ny olona … no dia ambenana akaiky dia akaiky ?
Olona ihany izy fa tsy Andriamanitra na tonga Andriamanitra .
Ny “Fahalehibiazan’ Andriamanitra”, dia miseho manokana eo amin’ny namoronany izao tontolo izao . Izao tontolo izao dia manaiky ny planin’ Andriamanitra .
Ireo foto-kevitra nolazaina ambangovangony ireo , dia miverimberina matetika ato amin’ ny Boky Hohitantsika mazava amin’ ny adi-hevitr’ i Joba sy ireo namany nitsapa alahelo azy izany rehetra izany . Fa na ny tenin’ i Joba , na ny tenin’ ny sakaizany hafa , dia samy ahatsiarovana fa tena misy ny “Fahalehibiazan’ Andriamanitra” :
Io Andriamanitra io dia tokony hatahorana , ary ny fahatahorana Azy dia toetra tokony hananan’ ny olombelona . Raha matahotra Azy ny olona dia tokony tsy hanao ratsy , .ary izany dia mbola mihatra hatrany amin’ ny faran’ ny “Sheol” .
Io Andriamanitra dia Tsitoha , Tompon’ ny Fahendrena , Mpitondra manana ny Fahamarinana rehetra , ary mamaly ny olona arak any ataony avy , na tsara , na ratsy .
Io Andriamanitra io dia Marina , hoy Joba , ka ahoana ihany ity izaho ity , tsy nanota , nifady ny ratsy , nefa…?
Izany fanontaniana nataon ‘i Joba izany , no halalinintsika amin’ ny paragrafy manaraka eto.